दाहालद्धारा सभामुखमा नयाँ नाम प्रस्ताव, सापकोटा नभए गजुरेल हुन्छ त ? « Kathmandu Television HD
दाहालद्धारा सभामुखमा नयाँ नाम प्रस्ताव, सापकोटा नभए गजुरेल हुन्छ त ?
काठमाण्डौं । नयाँ सभामुख चयनमा निकै सकस भइरहेका बेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभामुखका लागि नयाँ व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । एकातिर डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिनु र अर्कोतर्फ समामुख पूर्वएमालेलाई की पूर्वमाओवादीलाई भन्नेमा पेचिलो अवस्था भइरहेका वेला दाहालले आफना अर्का विश्वासपात्र हरिबोल गजुरेललाई अघि सारेका हुन् ।
अग्नी सापकोटाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक नभएपछि दाहालले गजुरेललाई प्रस्ताव गरेको स्रोतले वतायो । विहिवार लामै भएको छलफलमा दाहालले भने, सापकोटालाई स्विकार्न नसकिने भए गजुरेललाई अघि सारौ । समामुखमा दाहालले नयाँ नाम अघि सारेपछि ओलीले केही प्रतिकृया नदिएको पनि स्रोतले बतायो ।
सानिमा बैंकका सिइयो दाहाल भन्छन, “मनगढन्ते समाचार पढ्न मलाई फुर्सद छैन”
काठमाण्डौं । पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र एक व्यवसायी घराना विशाल ग्रुपसँग जोडेर एक साप्ताहिक
राजदूत अधिकारी पाकिस्तान प्रस्थान
पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारी शुक्रवार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । वरिष्ठ सरकारी अधिकृतको